Vatsva → Mahofisi ezvekuparadza hutachiona • METALCO ruoko hutsanana zviteshi
Disinfection nhepfenyuro / ruoko hutsanana nhepfenyuro chinhu chitsva mukupa kwedu sechinhu zvidiki zvekuvakwa. Iyo mhinduro inorerutsa zviitiko zvemaoko disinfection uye kuraswa kwemarara.
Kugeza nekubvisa maoko maoko Izvi zviitiko zvakakosha zvekudzivirira zvinobudirira kwekupararira kwehutachiona hwehutachiona uye hutachiona, hunowanzo kuve paganda remaoko.
Kunyanya munguva iripo yakaoma nguva denda rinonzi coronavirusyakanyatsoitwa hutsanana maitiro uye ruoko disinfection inobatsira zvakanyanya mukuderedza kwehutachiona nekudzora kwekupararira kweutachiona, uye izvi kwete munzvimbo dzekurapa chete, asiwo muzvitoro, nzvimbo dzezvitoro, mamiziyamu, maindasitiri, maresitorendi, mahotera nemaresitorendi, i.e. kwese uko kune mapoka makuru evanhu.
Onawo: Kurukisa masisitimu enzvimbo yekuuraya mishonga mumakamuri uchishandisa iyo yakaoma fog nzira
Kugara uchinyatsogeza uye kushambidza mawoko kwemaoko usati wapinda munzvimbo dzakapfigwa dzeveruzhinji, uye panguva yebasa, kutenga uye zvimwe zviitiko zvinotungamira mukubvisa zvinobudirira kwehutachiona uye hutachiona hutachiona kubva pamusoro pemaoko.
Hutachiona hwakawanda, kusanganisira coronavirus inokonzera chirwere Covid-19, is a RNA keteni yakafukidzwa neyembrane membrane, izvo zvinoita kuti zvive nyore kudzivirira kupararira kwayo uye chirwere nekushandisa makemikari akadai sipo nemishonga yekuuraya hutachiona.
World Health organisation inokurudzira kushambidzwa kwakakodzera kweruoko nesipo uye kwemaminitsi anokwana makumi matatu uye kushandiswa kwekugadzira mishonga gadziriso maererano nemin. 30% doro.
Kuwedzera, iwe unogona kuzvidzivirira pachako kubva kuutachiona nekuishandisa magirovhosi anogona kuraswa, masks kuvhara mhino nemuromo zvakare machira ekuuraya zvipuka inonyanya kushandiswa uye inobata nzvimbo.
Iyo chaiyo yekushambidza maitiro uye ruoko disinfection inoderedza hutachiona hutachiona huripo paganda remaoko nekushandisa kwemakemikari disinfectants.
Kuzora mushonga unouraya utachiona muganda remaoko kunofanira kutora masekondi makumi matatu uye haufanire kukanganwa huwandu hwakafanira hwegadziriro iyi, pamwe nekubvisa utachiona munzvimbo dzakaoma kusvika pamaoko, i.e. nzvimbo iri pakati peminwe.
Kugara uchigeza uye nehutsanana utachiona hwemaoko, kunyangwe hazvo zvichikosha kuti tidzivirirwezvisinei, vanoomesa ganda remaoko, izvo zvinogona kukonzeresa kugadzikana uye kuzvimba kweganda. Kuti kuderedze kukanganisa kwakashata kwemishonga inouraya utachiona inoshandiswa paganda remaoko, gadziriro yakakodzera yekunyorovesa maoko inofanira kushandiswa.
Pakushamba maoko, shandisa zvigadzirwa zvinogadzirwa neganda.
Maharaidhi Parizvino inoshandiswa kuisa utachiona marongero akavakirwa pane ethyl kana propyl doro. Iwo akanakisa anewo zvinhu zvinonyorovesa.
Metalco disinfection zviteshi
Sipo yeMetcoco uye vanopa utachiona vanobvumidza isiri-yekubata dosing yeiyo yakakodzera, yemhando yepamusoro hutachiona.
Zvitoro zvehutsanana (nzvimbo dzehutsanana) zvinoshanda uye zvakapinza marongero, akakodzera kushandiswa chero mukamuri.
Zvishandiso zvedu zvakagadzirwa semaoko sanitizer zviteshi uye nzvimbo yekugovera yezvinhu zvinobatsira kuve nekupararira kwe COVID-19, senge magurovhosi, masiki kana machira.
Disinfection nhepfenyuro yakarongedzerwa ine yakakosha yemukati simbi mudziyoinoita mabasa tsvina bin.
Metalco disinfection zviteshi zviri nyore uye zvine hungwaru kushandisa masisitimu akakwana nzvimbo dzeruzhinji nenzvimbo dzakavanzika, senge mahofisi, nzvimbo dzekutenga, zvikoro, majimu, maresitorendi uye zvimwe zvakawanda.
Uye zvakare, iyo disinfection station chishandiso chakakosha chekushandisa mukusangana nemamiriro ehutsanana pabasa uye mukuchengetedzeka kwevashandi, mukuwirirana neiyo minister protocol inoronga matanho ekudzora kupararira kwe coronavirus pabasa.
Mhinduro dzinoshandiswa muMetalco disinfection station inobvumira kurerutsa kwakanyanya kwe disinfection mudziyo kushanda, nyore nyore uye hutsanana kuraswa uye ita kuti nhepfenyuro dzive dzinoshanda uye dzakanaka, uye zvakare dzakakodzera kushandiswa munzvimbo dzemukati.
Iyo tsvina mudziyo inobvumira yehutsanana kuunganidzwa uye kuraswa kwemarara.
Iyo Matalco disinitness station set inosanganisira:
ruoko kugadzira dispenser
Makiromita echiteshi chetachiona (shanduro nemakumbo):
Inner liner huwandu: 60 lt
Kurema: approx .. 28 kg
Kuvakwa kwechiteshi chetachiona
Metalco disinitness michina inogadzirwa nesimbi yakachinjika kana simbi isina simbi, ine kumberi pani mune rumwe ruvara, nepo mativi mapaneru ari kuwanikwa mune manomwe mavara.
COLOMBO Chiteshi Chizere - isina simbi vhezheni
Aya masisitimu ekudzivirira hutachiona akagadzirirwa kushandiswa kwemukati uye anowanikwa mushanduro mbiri:
nechimiro chekunze chakazara chakagadzirwa nesimbi isina tsvina
nechimiro chekunze chakagadzirwa nehupfu-chakabirirwa simbi, paine kumberi nemhedzisiro yakapfava
Nekushandiswa kwekushandiswa kwemichina yekuita disinokufa munzvimbo dzeveruzhinji nenzvimbo dzemakambani, masisitimu nenzvimbo dzebasa, zvinogoneka. kusabatana ruoko disinfection.
Iyo yakakosha module inosanganisira:
maburi akagadzika pamadziro epamberi
imba ine musuwo yakadzikiswa kumberi nembambo yekuisa zvinodiwa (matipi, magurovhosi anoturikwa, masiki)
suo remberi nemavhuriro maviri emarara
Kuzvibatira nzvimbo saver
MAGELLANO Mhinduro inochinjika
Nechikumbiro chemutengi, zvinotevera zvimwe zvinhu zvinogona kuendeswa:
universal stainless simbi mubato
makumbo mana eABS panzvimbo yemakumbo anochinja
Disinawon station / CABRAL disenser
Iyo inoshanda uye yakajairisa mhinduro yakakodzera imba yemukati uye / kana kushandiswa kwekunze.
Iyo disenser ine iyo oval aluminium chubhu iyo inoshanda se 8 litita disinfectant gel mudziyo uye inofa-yakakandwa aluminium iyo inogara isineti simbi / chrome nendarira ruoko disenser.
Iyo yekuzvitsigira inowanikwa inogadzirwa nesimbi yakarongedzwa nehupfu-hwakapedzeredzwa kupedzisa senge disenser.
Zvekushandiswa kwemahombekombe, zvinokwanisika kuisa pazaipinda mumba, zvakare rakagadzirwa nealuminium, mukati meiyo oval tube ine dhairekodhi rezvinhu zvinosimbisa uye banga rakapetana nechimiro chekumira pajecha.
5 / 5 ( 47 mavhoti )
kenza disinawon muchinaOtomatiki ruoko disinfection chiteshiKuzvibatira nzvimbo saverisina-kubata ruoko disinfection chiteshicontactless disenserGedhi rekurwadzisa ruokoDisinfection masuwokuvhiya ruoko disinitnessColOMBO Full Stationnzvimbo disinawondisinversal ruokopharmacy ruoko disinfectionnguva ruoko disinfectiondisinitness ruoko disenserbvudzi bvudzi kurasikirwa disinfectiondisinawon kwemaoko uye zvishandisoruoko dhizaiti kurairadisinfection ruoko kananhanho nekenza kenza disinfectionayliffe ruoko disinfectiondisinfection ruoko pdfmvura ruoko disinawongadziriso disinawon gadzirirodisinversal ruoko isati yaunganidzwa eropadisinitness ruoko kumucheche achangozvarwaRossmann ruoko disinfectionruoko disinfection chirongwakenza schulke disinfectiondisinfection ruoko nedorodisinfection ruoko mune salondisinfection ruoko mune gastronomydisinfection ruoko mu salondisinitness ruoko muchipataradisinfection ruoko zvichienderana naniCABRAL dispenserecolab cancer disinawonhutsanana ruoko disinfectionhutsanana uye yekuvhiya ruoko disinitnesshutsanana kushambidza uye disinfection ruokohutsanana kushambidza maoko nekusabvisa hutachionamagirovhosi anoraswakana ruoko disinfectionMAGELLANO Mhinduro inochinjikamasikikugeza ruoko disinfectionkugeza uye kubvisa maoko maokohaccp kugeza maoko uye disinfectionkugeza nekubvisa mabhenji pamaoko uchishandisa ayliffe nzirakugeza maoko uye maitiro ekuuraya hutachionakugeza nekubvisa maoko muhomwe salonkugeza nekubvisa maoko muchipatarakushambidza maoko uye kuuraya disinfection zvinoenderana neAyliffe maitiroRuoko rwuri disinateti kumwana achangozvarwakurudyi ruoko disinawonutsanana poindipurell ruoko disinawonschulke ruoko disinfectiondisinfecting machirasensiva ruoko disinfectionganda rakabviswa ruoko disinfectionDisinfection masikisiMaharaidhiDisinversal stationDisinfection chiteshiRuoko disinfection chiteshiHutsanana chiteshiHutsanana chiteshiDisinfection nhepfenyuroDisinfection nhepfenyuroMetalco disinfection zviteshiDisinfection nhepfenyuroHutsanana zviteshihove yakaomatenzi ruoko disinfectionruramisa chikonzero nei zvichikosha kuuraya gomarara mumushandi webvudziVESPUCCIanorwara nekenza yekuuraya hutachionaYemahara-yakamira ruoko disinfection chiteshiHuru-yakamira ruoko sanitiser purellgel yekuuraya hutachiona hwekenza